इतिहासकै ठूलो आईपीओ भोलिदेखि खुल्दै, कति कित्तासम्म भर्न पाइन्छ ? – BikashNews
इतिहासकै ठूलो आईपीओ भोलिदेखि खुल्दै, कति कित्तासम्म भर्न पाइन्छ ?
२०७७ माघ १ गते १३:३७ विकासन्युज
काठमाडौं । नेपालको इतिहासकै ठूलो आईपीओ भोलि (माघ २ गते) देखि खुल्ने भएको छ । नेपाल इन्फ्रास्टक्चर बैंक लिमिटेडले भोलिदेखि कूल ८ अर्ब रुपैयाँ रुपैयाँ बराबरको प्राथमिक सेयर(आईपीओ) निष्काशन तथा बिक्री खुला गर्ने भएको हो ।
कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँदरको ८ करोड कित्ता सेयर निष्काशन गर्ने छ । जसमध्ये ०.२ प्रतिशत अर्थात् १ लाख ६० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि र ५ प्रतिशत अर्थात् ४ लाख कित्ता म्युचुअल फण्डहरुका लागि छुट्याइएको छ । र, बाँकी रहेकाे ७ करोड ५८ लाख ४० हजार कित्ता सेयर भने सर्वसाधारणका लागि छुट्याइएको छ ।
उक्त सेयर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा एनआईबीएल एस क्यापिटल रहेको छ । क्यापिटलका अनुसार कम्पनीकाे सेयरमा न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम २ करोड कित्तासम्म आवेदन दिन सकिने छ । यससँगै इच्छुक सर्वसाधारणले छिटोमा माघ ६ गतेसम्ममा आवेदन दिन पाउने छन् ।
नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले गत पुस १० गते मात्रै बैंकलाई साे मात्राकाे आईपीओ निष्काशन गर्न स्वीकृति दिएको हो । यसअघि नेपाली पुँजीबजारमा कुनै पनि कम्पनीले यति ठूलो आकारको सेयर जारी गरेका थिएनन् । यति ठूलाे मात्रामा सेयर जारी गर्ने बैंक नै पहिलाे कम्पनी हाे ।
सबैभन्दा ठूलो आकारको आईपीओ भएकाले याे कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैले बैंकको सेयर हात पार्ने अधिक सम्भावना रहेको छ । आईपीओमा धेरै आवेदन पर्दा पनि प्रतिआवेदक ७० कित्तासम्म सेयर पाइने सम्भावना देखिएको एक अध्ययनले बताएको छ । त्यसैले, यसमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले न्यूनतम ७० कित्तादेखि १०० कित्तासम्मका लागि आवेदन दिँदा उचित हुने जानकारहरु बताउँछन् ।